1526 days ago	(http://nineninesanay.blogspot.com)
ပိန္နဲသီးက အမှည့်စားလို့ရသလို အစိမ်းကိုလည်း အခုလို ဟင်းရည်ချက်စားလို့ ရပါတယ်။ ပိန္နဲသီးဟင်းရည် ချက်ဖို့ရာ မခက်ပါဘူး။ အောက်ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း အဆင့်ဆင့်လုပ်သွားရင် စားကောင်းတဲ့ ပိန္နဲသီးဟင်းရည် တစ်ခွက်ကို အကုန်အကျနည်းနည်းနဲ့ ချက်စားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်မှာ ချက်စားတတ်တဲ့ ရှမ်းအစားအစာ	read more » Discuss Add this link to... Bury
1525 days ago	(http://ywartharlay-ytu.blogspot.com)
2009 Chinese Government Scholarship-Degree Programs Admissions Notice （only for GMS countries）2009 Chinese Government Scholarship-Degree Study in Provinces & Autonomous Region Program has been started. The School of International Studies of Yunnan University, under the program-rel	read more » Discuss Add this link to... Bury
နိုင်ငံတိုင်း လူမျိုးတိုင်းမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်၊ လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက် စံနမူနာပြ သူရဲကောင်းတွေရှိတတ်ကြတယ်။ သူရဲကောင်းဆိုတာ သူတကာမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်နိုင်တဲ့သူ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ် အနစ်နာခံပြီး အများကောင်းကျိုးအတွက် ရွက်ဆောင်သူ၊ ဥာဏ်ပညာ အမြော်အမြင်ကြီးသူ၊ စိတ်ကောင်းစေတနာရှိပြီး အများက ယုံ	read more » Discuss Add this link to... Bury
Createacustom panoramic photo viewer with the smooth image moving effect, or horizontal navigation effect.	read more » Discuss Add this link to... Bury
ဆန်းပညာ ၏ နိမိတ်ဆောင် ဟောပြောချက်
1525 days ago	(http://mmastrology.myanmarbloggers.org)
အမျိုးသမီးကတော့ မထင်မှတ်ဘဲ ကျနော့်ကို ရွှေဆွဲကြိုး တစ်ကုံး လက်ဆောင်ပေးတယ်တစ်ခုသော သြဂုတ်လ ၂၀၀၈ ခု သောကြာနေ့ညချမ်း ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင်. . ဟောပြောမှုအတွက် client မျှော်နေချိန် . . email သို့ paypal notification မှ ဥာဏ်ပူဇော်ငွေ ၅ ပေါင် လက်ခံရရှိကြောင်း ရောက်ရှိလာလေ၏။"ေ	read more » Discuss Add this link to... Bury
jQuery Translation Plugin and Bookmarklet - SundayMorning
A jQuery plugin which allow site-owners to offer their visitors some easy and fancy ways to translate their content in more than 30 languages.	read more » Discuss Add this link to... Bury
Myanmar professional model, Tin Moe Lwin is still pretty and fresh
1526 days ago	(http://www.myanmarcelebrity.com)
She is Myanmar famous and popular mo	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: She is Myanmar famous and popular mo">
1526 days ago	(http://warwarkhaingmin.blogspot.com)
မင်္ဂလာပါရှင်..ဗေဒင်ဝါသနာရှင်များအတွက် ကျမရဲ့မောင်လေးဖြစ်သူ မင်းလင်္ကာ မှ Forward mail လေးပို့ပေးလာတဲ့ အတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်..***************************************************ဖူးငုံ ဆယ်ကျော်သက် စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ အတွက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ ဗေဒင်ဟောပြောမှု ပုံစံများကိ	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: | Bookmarks « previous1...45678910111213...105 next »